रनबिर कपुर किन सिक्दै छन जिम्न्यास्टिक र हर्स-राइइडिग सिक्दै छन त ? – An Online Entertainment News Portal
HomeNewsBollywoodरनबिर कपुर किन सिक्दै छन जिम्न्यास्टिक र हर्स-राइइडिग सिक्दै छन त ?
आयान मुखर्जीको याक्सन चलचित्र ‘ड्र्यागन’ मा देखिने भएका छन । आयान का अनुसार यो चलचित्र याक्सनको फुल प्याकेज हो र यसको लागि राणाबिर ले जिम्न्यास्टिक र हर्स-राइइडिग सिक्नुपर्ने हुन्छ ।
२०१९ मा यो चलचित्र रिलिज गार्ने ‘ड्र्यागन’ टिमको योजना छ । याक्सन चलचित्र भएको ले राणबिरले धेरै फिजिकल ब्यायाम र बिभिन्न ट्रेनिङ लिनुपर्ने मुखर्जीले जानकारी दिए । यस चलचित्र मा फिमेल लिडमा आलिया भट्ट हुनेछिन ।